ट्याग: प्रेस विज्ञप्ति | Martech Zone
ट्याग: प्रेस विज्ञप्ति
बुधवार, अगस्त 13, 2014 मंगलवार, अगस्त 12, 2014 Douglas Karr
हामीले २०१ Marketing सामग्री मार्केटिंगको हालको राज्य, एलोक्वाबाट सामग्री मार्केटिंगको राज्य प्रकाशित गरेका छौं, र २०१ Content सामग्री मार्केटिंग ट्रेन्डहरू ... के तपाईं यस बर्ष एक थिम देख्न लाग्नु हुन्छ? Uberflip बाट यो इन्फोग्राफिक B2014B र B2014C व्यवसाय बीच सामग्री मार्केटिंग को वर्तमान स्थिति चित्रण गर्दछ। मार्केटर्सले हाल कुन रणनीतिहरू मन पराउँछन्? के उनीहरूले अपेक्षित नतिजाहरू हेरिरहेका छन्? भविष्य कस्तो देखिन्छ? यसलाई जाँच गर्नुहोस्! यो इन्फोग्राफिकको केहि ले लिन्छ
यदि तपाई एक सार्वजनिक सम्बन्ध शुरुआती हुनुहुन्छ भने, ब्राउनस्टिन र एगूसा द्वारा PR लाई सम्पूर्ण गाईड जाँच गर्नुहोस्। र PR रणनीतिमा केहि थप विवरणहरूको लागि, पाहुना पोष्ट पढ्न नबिर्सनुहोस् - स्कट मोन्टीको शानदार ब्लगमा Conrad Egusa बाट - पूर्व सलाहकार पूर्व लेखकबाट पीआर सल्लाह। फेला पार्नको लागि मार्टी थम्पसनलाई विशेष धन्यवाद! यदि म केहि थप्न जाँदैछु भने, यो कतै between को बिच एक चरण हुनेछ
बिहीबार, सेप्टेम्बर 12, 2013 सोमबार, सेप्टेम्बर 16, 2013 Douglas Karr
यो एक शानदार समानता हो जुन डेन्ड्राइट पार्कले प्रदान गरेको छ कि म अधिकसँग सहमत हुन सक्दिन। तिनीहरूले तपाईंको सामग्री मार्केटिंग रणनीतिमा बहु-पक्षीय दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछन् जुन एक ठूलो आधार आवश्यक हुन्छ र त्यहाँबाट बढ्छ! यो तपाईंको व्यवसायको लागि सामग्री मार्केटिंगको एक बुद्धिमान रूख हो। ठोस जरा (आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, एसईओ र एनालिटिक्स) ट्रान्क (तपाईंको वेबसाइट) लाई सम्हाल्न आवश्यक छ तपाइँको सामाजिक मिडिया गतिविधिहरू (मुकुट) को भार बोक्न।
शुक्रबार, डिसेम्बर 23, 2011 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
जबकि म समय-समयमा ट्वीट बहसको कदर गर्छु, हरेक पटक एकै पटकमा यहाँ कुराकानी साझा गर्न र यसलाई थप छलफल गर्न योग्य छ। आज मैले प्रदान गरिरहेको उदाहरणले उनीहरूको नयाँ वेबसाइटको घोषणा गर्न डिट्टो पीआरसँग काम गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिको साथ सुरू भयो। PRDude ... सार्वजनिक सम्पर्क उद्योग को एक स्वयं घोषणा घोटाला जो अज्ञातमा रोक्ने (एक महान सामाजिक रणनीति), प्रेस विज्ञप्ति कार्य मा लिए किनकि